जन्नुहोस : यिनी हुन् सुनसरीको पहिलो महिला इनिस्पेक्टर ! सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोला « Online Tv Nepal
जन्नुहोस : यिनी हुन् सुनसरीको पहिलो महिला इनिस्पेक्टर ! सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोला
Published :5January, 2020 2:33 pm
सुनसरी प्रहरीले पहिलो महिला अधिकृत पाएको छ । इनरुवामा कार्यालय स्थापना भएयता प्रहरी अधिकृतको रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा पहिलो महिला अधिकृतको दरबन्दी कायम भएको हो । प्रहरी संगठनमा त्यसैपनि महिला प्रहरी कम छन् । त्यसमा पनि अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो ओहदामा सीमित मात्र छन् । कानुन पालनाको क्रममा प्रहरीबाट महिलामैत्री व्यवहार हुन नसकेको आवाज समेत बेलाबखत उठ्ने गरेको छ । यस्तोमा सुनसरी प्रहरीले पाएको महिला अधिकृतको दरबन्दीले जिल्लाबासी महिलाहरुको सवालमा सहजताको अनुभुती गर्न पाउने सम्भावना देखाएको छ ।